Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke | Somali Wiki
Home / Taariikh / Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke
Posted by: Black in Taariikh March 23, 2017	Comments Off on Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke 283 Views
Taariikhda dhalashada 18-June-1960
Goobta Dhalashada Muqdisho
Gobolka Dhalashada Banaadir
· Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke waa siyaasi, waana Reysal Wasaarihii ugu horeeyay ee Dowladdii KMG ahayd ee Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed, 2009-kii. Waxaa dhalay madaxweynihii 2-aad ee Soomaaliya, Cabdirashiid Cali Sharma’arke.
· Waxa uu bartay Cilmiga Dhaqaalaha iyo Siyaasadda. Dhalashadiisa asalka ah waa Soomaali, balse waxa uu dhalosho 2-aad ka haystaa dalka Canada, halkaas oo ay isaga iyo qoyskiisu ka heleen dib u dejin, markii ay dowladnimadii Soomaaliya burburtay 1991-kii.
· Waa dhal madaxeed iyo dhal qoys caan ka ah Soomaaliya. Hooyadiis waxaa lagu magacaabaa Ruqiyo Daahir Cali Boos, waxa ayna ku geeriyootay dalka Canada, isaga oo Reysal-Wasaare ka ah dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ka ahaa. Awoowgii dhalay hooyadii, Daahir Cali Boos, ayaa ahaa wadaad caan ahaa.
· Shaqooyin la xiriira Diblomaasiyadda ayuu kasoo qabtay dalalka Sri Lanka, Sudan iyo Sera lion, isaga oo matalaya Qaramada Midoobay. Sudan ayuu ku dhaawacmay, isaga oo halkaas u jooga shaqo uu hayay Qaramada Midoobay. Hay’ado ka shaqeeya hormarinta oo Canada ka diiwaangalsan, sida Center For Peace and Development Initiatives, ayuu sidoo kale kasoo mid noqday. Mareykankana waxa uu kasoo noqday Safiirka Soomaaliya u fadhiya halkaas intii u dhaxeysay July 2014 ilaa December 2014.
· Cumar Cabdirashiid waxa uu waxbarashadiisa aasaasiga ahayd ku qaatay Soomaaliya. Heerka Koowaad ee Jaamacadda (Bachelor Degree) waxa uu ka qaatay Jaamacadda Ummadda Soomaaliya, halkaas oo uu ka bartay Cilmiga Siyaasadda iyo Dhaqaalaha.
· Heerka Labaad ee Jaamacadda (Masters Degree) waxa uu ka qaatay Jaamacadda Carleton University ee magaalada Ottawa, dalka Canada. Halkaas waxa uu ka bartay Cilmiga Siyaasadda.
§ Shaqadisii ugu horeysay waxa uu Cumar Cabdirashiid Cali kasoo qabtay Bankiga Soomaaliya. Shirkadda Cocacola ayuu sidoo kale kasoo shaqeeyay.
§ Sanadkii 2000, Qaramada Midoobay ayuu uga soo shaqeeyay Dalalka Sierra Lione, Sri Lanka iyo Sudan. Sudan ayuu Cumar Cabdirashiid kasoo noqday Ergeyga Qaramada Midoobay u qaabilsan Sudan, markaas oo uu ka shaqeyn jiray Gobolka Darfur ee dalkaas.
§ Hay’ad ku diiwaangalsan Canada oo la yiraahdo Center For Peace and Development Initiatives ayuu Cumar ka soo mid ahaa.
§ 13 February, 2009 ayuu noqday Reysal Wasaarihii ugu horeeyay dowladdii Shariif Sheekh Axmed madaxweynaha ka ahaa. Isla 14-kii February ayuu kalsoonida Baarlamaankii KMG ahaa ee Soomaaliya helay.
§ July 2014-December 2014, ayuu soo ahaa Safiirka Soomaaliya ee Markeykanka, ilaa markii dambe markii loo magacaabay Reysal Wasaaraha Soomaaliya uu xilkaas ka tagay.
§ 17-December, 2014 ayuu markiisii 2-aad noqday Reysal Wasaare. Iasaga oo sidoo kale noqday Reysal Wasaarihii 3-aad ee Madaxweynihii dowladdii ugu horeysay ee rasmiya 1991-kii kadib, taa oo uu madaxweyne ka noqday Xasan Sheekh Maxamuud. Wuxuu sidaas ku noqday mas’uulkii ugu horreeyay ee laba jeer Ra’iisul wasaare ka noqda Soomaaliya.
§ 08 Febraayo 2017: wuxuu isku soo taagay xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya. Hase yeeshee, wuu ku guul darreystay.
Previous: TAARIIKHDA XASAN ERREY:
Next: Cumar Carte Qaalib